Nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanampy mpanjifa hanao fifindra-monina sarotra amin'ny WordPress izahay. Ny mpanjifa dia nanana vokatra roa, izay nanjary nalaza hatramin'ny tsy maintsy nanasaratsarahana ireo orinasa, ny marika, ary ny atiny mba hampisaraka sehatra. Tena ilay ezaka io!
Mijanona ho azy ireo ny faritra misy azy ireo, saingy ny sehatra vaovao kosa dia hanana ny atiny rehetra momba an'io vokatra io… avy amin'ny sary, lahatsoratra, fandinihana tranga, fisintomana, endrika, loharanom-pahalalana sns. Nanao fanadihadiana izahay ary nandady ilay tranonkala mba hahazoana antoka fa tsy tsy mahita fananana tokana ianao.
Raha mampiasa motera WordPress Managed WordPress Hosting ianao WPEngine, manana modely hiatrehana ny fanodinana alohan'ny hitsangan'ilay olona ny tranokalanao… endrika tsara tarehy iray izay afaka mampihena ny fahantrana sy ny fihoaram-pefy amin'ny fampiantranoana anao.
Ary, mazava ho azy, azonao atao manorata fitsipika mankany amin'ny rakitra .htaccess amin'ny mpizara WordPress anao… saingy tsy hanome sosokevitra azy aho. Fahadisoan-kevitra syntax iray ianao tsy hahatonga ny tranokalanao tsy hiditra!
Satria nanoratra lalao nifanitsy ianao, tsy hizotra mankaiza izany URL izany! Noho izany, mety halaim-panahy ianao hanao azy io ho fomba fitenenana mahazatra ary manampy wildcard amin'ny URL: